China Round grill wire wire harato sy mpanamboatra | Jinqu Metal
Fivarotana Barbecue grill harato
Arina Grill Mesh
Fanatsarana mahitsizoro azo atsipy ...
Boribory tariby famolahana
Ny jiro BBQ boribory azo alefa dia antsoina koa hoe harom-baravarankely voasarona, izay mety hisorohana ny fisian'ny dian-tànana.
Nahay manokana tamin'ny famokarana sy fanondranana harona Barbecue nanomboka ny taona 2005 izahay. 300.000 ny vokatra isan'andro. Ny orinasanay dia iray amin'ireo mpamatsy ambony ny harato BBQ any amin'ny faritanin'i Anping, aiza ny tanàna misy harato.
Ny saribao azo esorina amin'ny boribory BBQ dia antsoina koa hoe jirony manarona, izay mety hisorohana ny fisian'ny dian-tànana.
Ny harato azo ampiasaina dia ampiasaina amin'ny barbecue Japon sy Korea. Ny harato tariby dia miaraka amina toetra mora vidy, tsy mila manasa, mamonjy asa, mavesatra ary mora entina amin'ny barbecue.
Fantsom-panafody azo ampiasaina amin'ny habe mahazatra
Jiro boribory boribory fisaka
Savaivony tariby 0.8mm, 0.85mm, 0.9mm, 0.95mm, 1.4mm
harato 11mm, 12mm
Size 445mm, 300mm, 295mm, 285mm, 280mm, 270mm, 263mm, 260mm, 250mm, 245mm, 240mm, 237mm, 230mm, 200mm
Convex grill tariby harato
Size 330mm, 300mm, 295mm, 280mm, 270mm, 260mm, 245mm, 240mm, 230mm
Harato grill grill ARC
Size 330mm, 300mm, 295mm, 280mm, 270mm, 260mm, 240mm
Mino izahay fa ny fiarahana miasa maharitra dia matetika vokatry ny kalitao avo, fanampiana fanampiana fanampiny, fihaonana manankarena ary ny fifandraisan'ny tena manokana ho an'ny vidin'ny China Stainless Steel BBQ Grill Net Crimped Wire Mesh ho an'ny BBQ, ny varotra rehetra dia amboarina miaraka amin'ny fitaovana mandroso sy fomba fanao henjana QC ao mividiana mba ho kalitao tsara sasany. Tongasoa ireo mpanjifa vaovao sy antitra mba hifandray aminay amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa.
Vidiny tsy voatanisa China Barbecue Grill Mesh ary BBQ Grill Net vidiny, Manaraka tsara ny serivisy ho an'ny mpanjifa izahay ary mankamamy ny mpanjifa rehetra. Notazominay foana ny lazanay teo amin'ny sehatry ny indostria nandritra ny taona maro. Marina izahay ary miasa amin'ny fananganana fifandraisana maharitra amin'ireo mpanjifantsika.
Mba hahafahanao manatanteraka tsara ny fitakian'ny mpanjifa, ny asanay rehetra dia tanterahina mifanaraka amin'ny teny filamatray "Vidiny avo lenta, mifaninana, serivisy haingana" ho an'ny mpamatsy OEM / ODM China BBQ Grill Grates Wire Mesh Stainless Steel Barbecue BBQ Grill Crimped Mesh, Manantena ny hanana fifandraisana orinasa maharitra miaraka aminao izahay. Ankasitrahana tokoa ny hevitrao sy ny soso-kevitrao.
OEM / ODM mpamatsy China Barbecue Wire Mesh ary BBQ Crimped Wire Mesh, ny tanjonay dia ny "hanomezana vokatra voalohany sy serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay, ka azonay antoka fa tsy maintsy manana tombony kely amin'ny fiaraha-miasa aminay". Raha liana amin'ny iray amin'ny vokatray ianao na te hiresaka momba ny filaharana, dia aza misalasala mifandray aminay. Manantena ny hanana fifandraisana ara-barotra mahomby amin'ny mpanjifa vaovao manerantany isika ato ho ato.
Teo aloha: Fantsom-bozaka azo ampiasaina amin'ny kianja azo ampiasaina
Manaraka: Jiro mahitsizoro azo atsipazo azo ampiasaina
Bbq Wire harato
Grill Wire Grill
Steel harato Fa Grill
Wire harato Fa Bbq Grill